Tag: suuq daruur suuq ah. Martech Zone
Tag: suuq daruur
Arbacada, Maarso 23, 2022 Monday, May 16, 2022 Douglas Karr
Suuqgeynta Cloud: Sida Loo Sameeyo Automation Istuudiyaha Automation-ka si loogu soo dejiyo Xiriirada SMS MobileConnect
Isniin, Maarso 14, 2022 Isniin, Maarso 14, 2022 Manash Sahoo
Shirkaddeennu waxay dhawaan u fulisay Salesforce Suuqgeynta Cloud macmiil haysta ilaa dersin is dhexgalka kuwaas oo lahaa isbedelo adag iyo xeerarka isgaarsiinta. Xididku wuxuu ahaa saldhiga Shopify Plus oo leh Diiwaangelinta Dib-u-Celinta, oo ah xal caan ah oo dabacsan oo loogu talagalay bixinta ganacsiga e-commerce-ku-saleysan. Shirkaddu waxay leedahay hirgalinta fariimaha mobaylka ee hal-abuurka leh halkaas oo macaamiishu ay ku hagaajin karaan rukunka fariimaha qoraalka ah (SMS) oo ay u baahdeen inay u guuraan xidhiidhkooda moobaylka MobileConnect. Dukumentiyada loogu talagalay
Xarunta Xulashada Emailka iyo Ka-saarista Bogagga: Adeegsiga Doorarka iyo Daabacadaha
Talaado, September 29, 2020 Talaado, September 29, 2020 Douglas Karr
Sanadkii la soo dhaafey, waxaan la shaqeyneynay shirkad heer qaran ah oo ah 'Salesforce' iyo 'Suuq geynta Cloud guuritaanka iyo hirgelinta Bilowgii helitaankeenna, waxaan ku tilmaannay arrimo muhiim ah oo la xiriira waxa ay doorbidaan - kuwaas oo ahaa kuwo hawlgallo ku saleysan. Markay shirkaddu abaabusho olole, waxay abuuri lahayd liis ay ku qoran yihiin dadka qaata meel ka baxsan boggooda suuqgeynta iimaylka, waxay u soo geliyaan liiska liis cusub, waxay qaabeeyaan emailka, waxayna u diraan liiskaas.
Arbacada, Janaayo 16, 2019 Sabtida, Janaayo 19, 2019 Denis Zhinko
Suuqyayaashu waxay u muuqdaan inay shakhsi ahaan u arkeen iimayl ahaan inay tilmaam u tahay waxtarka sare ee ololayaasha emaylka oo ay si ballaaran u isticmaalaan. Laakiin waxaan aaminsanahay in habka caqliga leh ee email ugu dirista shaqsiyadeed ay natiijooyin wanaagsan ka hesho aragtida qiimeynta waxtarka leh. Waxaan dooneynaa inaan maqaalkayaga ka soo bandhigno emaylkii hore ee wanaagsanaa ee loo yaqaan 'emayl casriyeysan' si loo muujiyo sida farsamooyinka kala duwan u shaqeeyaan iyadoo kuxiran nooca emaylka iyo ujeeddada. Waxaan siin doonnaa aragtidayada